DAAWO SAWIRO: Shirkii IGAD ee Muqdisho oo qodobo dhowr ah laga soo saaray | Barbaariyaha bulshada
DAAWO SAWIRO: Shirkii IGAD ee Muqdisho oo qodobo dhowr ah laga soo saaray
Shirkan oo maanta ka qabsoomay Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxweyne-yaasha Somaliya, Kenya, Uganda, Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Wakiilo iyo Wasiiro ay ku meteleyeen dalalka Igad ee Madaxdoodu aanay ka qaybelin shirkaasi.
Sidoo kale shirkan, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wafuud ka kala socotay Ururada Jaamacadda Carabta, Midowga Yurub, Qaramada Midoobe iyo xubno kale oo lagu soo casuumay.
Shirka oo muddo hal saac ka socday Xarunta Somaliya, ayaa waxaa laga soo saaray War Murtiyeed ka kooban 22 qodob. 21 ka mid ah waxaa looga hadlay ujeedada shirkan, doorashada sanadkan lagu wado inay ka dhacdo Somaliya, ammaanka, dagaalka lagula jiro Ururka Al Shabaab, Dhismaha Maamulka Gobolada Shabellaha Dhexe & Hiiraan iyo xushmad loo muujiyay qaranimada madax bannaanida ee Somaliya. Qodobka ugu dambeeyay ee laga soo saaray shirka, ayaa looga hadlay arrimaha Sudan.
Gaba gabadii shirka, ayaa qodobadan waxaa Saxaafadda u akhrisay Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya, haweeneyda lagu magacaabo Amina Maxamed, oo sheegtay in kulankan xushmad loogu muujiyay qaranimada madax bannaanida Somaliya iyo jiritaankeedaba.
Sidoo kale waxay sheegtay in kulankan lagu taageeray, sida ay Dowladda Somaliya uga warbixisay diyaar-garowgeeda ee doorashooyinka ka dhacaaya dalka.
C/salaan Cumar Hadliye, Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya, ayaa sheegay in shirkani uu tusaale u yahay inaanay Somaliya dhiman, isla-markaana ay dib ugu soo laabatay dhabaha horumarka.
Waa markii ugu horeysay oo Magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo kulan ceynkani oo kala ah, tan iyo sanadkii 1986-kii oo la aas aaay Urur Goboleedka Igad, oo hadda leesku yiraahdo toddobo ka mid ah Wadamada Afrikada Bari dhaca.